SomaliTalk.com » 2014 » October » 07
Home » Archive Maalinta October 7th, 2014
Wararkii ugu Dambeeyey Soomaaliya Maanta. Dhagayso
Xukuumadda Soomaaliya oo Baaq Digniin ah u dirtay Wadamada la deriska ah Somalitalk Muqdisho: Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Shiikh Axmed ayaa baaq u diray Dalalka Soomaaliya la deriska ah isagoona uga digay Khatar uga iman karta Dagaalyahanada Xarakada Shabaab. Cabdiweli Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in Dalalkaasi ay sameeyaan Feejignaan dheeraad ah kana digtoonadaan inay...
Warbixin dhamaystiran oo ku saabsan shirweyanah Midnimo kow ee Garbahaarey.
Wejigii koowaad ee shirweynaha wadatashiga iyo midnimada bulshada ku dhaqan gobolka Gedo, ayaa ka furmay magaalada Garbahaarey , iyadoo xafladdii furitaanka shirka ay kasoo qeybgaleen madax ka tirsan dowladda, Siyaasiyiin, Ganacsato iyo qeybaha bulshada ku dhaqan gobolka Gedo. Intii ay xafladdu socotay ayaa waxaa laga jeediyay khudbado kala duwan, waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay gudigii shirka...
Hayadda Humanitarian African Relief Organization (HARO) oo soo Gabagabeysey Barnaamij Hilbo Qaybin ah oo ku Aadan Ciidul Adhxaa.
Hay’ada Humanitarian African Relief Organization ee Marka la soo gaabiyo la yiraah (HARO) oo inta badan ku howlan taageerida Dadka tabaaleysan, ayaa waxay soo gabagabeeyesey Barnaamij Xoolo Qaybin oo ku aadan Ciidul Adhxaa , waxayna Barnaamijkaas ka fulisey Magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo gaar ahaan Xerooyin ay ku jiraan Dad Barakacayaal ah iyo dad naafo ah. Intii ay ka socotey Hilbo Qaybintaas...
Sidii looga Ciiday Seattle Washigton, Sweden iyo Gaalkacayo- Al-Adxa 2014
Sidii looga ciiday Seattle Washington, Gaalkackayo iyo Sweden Flen Daawo oo ka bogo Magaalada Seattle Washington ayaa si wanaagsan looga ciiday, waxaana ciida soo qaban qaabiyey Masaajidka wayn Abubakr Islamic Center of Washington. Waxaa goobta ciida oo ahayn sida sunnaha ah buux dhaafshay muslimiinta ku noo Seattle Washington, dadka ayaa aad u faraxsanaa isuguna hambalyeynay ciida Al-Adxa ee...
Guddiga Joogtada Ah Ee Baarlamaanka Oo Ka Dooday Naqshada Dhismaha Cusub ee Baarlamaanka “SAWIRRO”
Guddiga Joogtada ah ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa kulan ay maanta oo axad ah ku yeesheen magaalada Muqdisho waxa ay kaga doodeen naqshada dhismaha cusub ee Baarlamaanka iyo dhismayaasha xarumaha Baarlamaanka uu ku yeelan doono gobollada dalka. Kulankan oo ka dhacay xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho waxaa shir gudoominayey Gudoomiye ku xigeenka Labaad ee Baarlamaanka Mudane Mahad...